Ihe Ntuziaka 2019 Kachasị Egwu Na Gonadorelin Acetate
Ihe niile banyere Gonadorelin Acetate
2. Gonadorelin Acetate usoro nke ihe
3. Kedu ihe Gonadorelin Acetate nyere anyị?
4. Otu esi eji Getadorelin acetate
5. Gonadorelin Acetate mmetụta ndị dị na ya
6. Zụrụ Gonadorelin Acetate online
Achọpụtara azụ na 1971, Gonadorelin acetate edekwara dị ka GnRH na-akpọkwa hormone na-ahapụ gonadotropin. Gonadorelin Acetate (34973-08-5) bụ decapeptide synthetic nke a na-akwadebekarị site na peptide synthesis na mpaghara siri ike. Ọ bụ GnRH nke a na-ahụ maka ntọhapụ nke hormone luteinizing nakwa dịka ihe na-eme ka hormone na-akpali akpali site na gland pituitary gland. Ọ na-emetụta nnọọ hormones na gonadotropins.
A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ihe dị iche iche dị ka ọgwụ na-enweghị afọ na ịbawanye ogo homone n'ime ọgwụgwọ ọrịa cancer nke nwere hormone dịka adenocarcinoma prostine na carcinoma. Ọzọkwa, nke Gonadorelin Acetate (34973-08-5) na-arụ ọrụ dịka ọgwụ magburu onwe ya maka nsogbu dị iche iche dịka oge dị oké njọ na adenomyosis, ogo dị elu nke na-eto eto dị elu, na mmalite nke ndụ ụmụaka, dịka ebe nlekọta ahụike nke transgender, na igbu oge oge ndụ transgender ntorobịa dị iche iche eji. GnRH agonists na-enye site na injections na abụba, dị ka implants esịn abụba, na dị ka nasal sprays.
Ebuputara analogs GnRH maka ojiji ogwu n’ime iri na iteghete. Onye a maara nke ọma na GnRH analog zuru oke bụ leuprorelin (aha a na-akpọ Lupron). GnRH analogs na-awa dị ka ọnụọgụ ọgwụ. Enwere ike igosipụta afọ ojuju nke GnRH n'ọmụmụ ihe dị iche iche nke ndị sayensị mere kemgbe mmalite ya. N'ime otu nzuzo, GnRH na-achịkwa usoro posh nke uto cyst, ovulation, na mmezi gland na-enweghị eriri n'ime nwanyị, na gametogenesis n'ime nwoke. Ndụ ya dị mkpụmkpụ chọrọ nfuli infusion maka ojiji ya. N'okpuru ọnọdụ ọdịnala, GnRH ma ọ bụ GnRH agonists bụ ọgwụ na-adịghị adịte aka. Ozugbo a na-enye ha dị ka implants hypodermic, a ga-eji ha dị ka ngwaọrụ ogologo
GnRH agonists ndị na-ere ahịa ma na-enye ha ọgwụ maka ịṅụ ọgwụ na-emepụta buserelin, Gonadorelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin, na triptorelin. GnRH agonists nke a na-ejikarị ma ọ bụ nanị na nkà mmụta ọgwụ embodydeslorelin na fertirelin. GnRH agonists nwere ike na-elekọta site na ogwu, site na implant, ma ọ bụ intranasally dị ka nasos ịgba. A na-emepụta injectables kwa ụbọchị, kwa ọnwa, na nkeji kwa izu, a na-enyekwa mkpịsị aka nke nwere ike ịnwụ site n'otu ọnwa ruo otu afọ. Ewezuga Gonadorelin, nke a na-arụ ọrụ dịka Progonadotropin, na agonists GnRH niile a kwadoro dị ka mgbochi-gonadotropins.
A na-enye ndị na-eme ihe na-emetụta GnRH na-ejighị ya mee ihe n'ime ọgwụ ndị na-esonụ:
Ngwunye mkpirisi oge (otu ugboro kwa ụbọchị): buserelin, histrelin, leuprorelin, triptorelin
Ihe ogbugba a na-eme ogologo oge ma ọ bụ pellet awara (otu ugboro na ọnwa 6): leuprorelin, triptorelin
Na-etinye ya n'ahụ (otu ugboro na ọnwa ole na ole): buserelin, goserelin, leuprorelin
Pellet na-arụ ọrụ na-eme nke ọma (otu ugboro kwa afọ): histrelin, leuprorelin
Ngwunye ụda (abụọ na ugboro ole na ole kwa ụbọchị): buserelin, nafarelin
GnRH agonists bu ihe eji eme ihe mgbe ihe GnRH nke oma na-agbanwe ya, mgbe ufodu uzo abuo na otu ma na adi n’onodu vi (amino acid ngbanwe), itoolu (alkylation) na iri (nhichapụ). Ndị nnọchi anya a na-egbochi mbibi ngwa ngwa. Agonists nwere nnọchi abụọ gụnyere leuprorelin, buserelin, histrelin, goserelin na deslorelin: nafarelin nke onye ọrụ na triptorelin bụ ndị agonist nwere otu nnọchi na ọnọdụ (vi).
Usoro - Dị ka ihe na-ewepụta gonadotropin nke na-agbapụta (GnRH), Gonadorelin bụ isi na-akpali njikọ na enweghị nchekasị nke gonadotrophic hormone (LH) site na gland. A na-amụpụtakwa Gonadotropic hormone (FSH) na unharness site na Gonadorelin, n'agbanyeghị na ọ pekarịrị ogo. N'ime ụmụ nwanyị na-ebute mmiri na obere endocrine glands na-arụ ọrụ nsogbu, mmeghachi omume gonadotrophins bukwara ibu karịa mmeghachi omume gonadotrophic hormone. Na Gonadorelin acetate injection gi kwesiri inye ndi mmadu ka ha zuta gi ka gi onwe gi jiri aka gi dozie onwe gi.
Maka ọgwụgwọ nke mgbaàmà, oge igbu oge, na usoro mmụta ahụ, gọọmenti nke Gonadorelin na-arụ ọrụ iji mee ka usoro mgbatị nke GnRH ghara ịdị na-agwọta oge nke ndụ, usoro ọgwụgwọ nke ọnọdụ physiological kpatara hypo gonadotropic enweghị ike , na ịmalite usoro ndu n'ime ụmụ nwanyị ndị ahụ na-egosi usoro ihe nrịba. Nke a na - ebubata n'ọtụtụ ọkwa nke pituitary gonadotropins hormone gonadotrophic na gonadotrophins, nke na - eme ka ndị na - emepụta ọgwụ na - emepụta ọgwụ.
3. Gonadorelin Acetate na-enye anyị?
GnRH na-ebute ihe na-adịghị mma nke hormone gonadotrophic, nke nwere ike ịmalite usoro ndụ n'ime osisi dị egwu ma nwee ike ịkwalite nsụgharị nke cysts na bitches na bara uru bara uru na gland gsts. E jiriwo GnRH mee ihe site na nnwale iji mepụta nsị n'ọkụ nke anoestrum.
GnRH na-agbanyeghị n'omume nke gonadotrophins, na hormone gonadotrophic nwere ike ikwe ka ntinye n'ime ụbụrụ. GnRH nwere ike ime usoro ndu na Queens.
Nchọpụta nke ọnụnọ nke testicles na cryptorchids (GnRH na-eme ka ọ ghara ịdị na-ebute hormone na-adaba na steeti n'etiti minit iri na ise, na-esote ụmụ nwoke site na njigide testosterone).
Nkwalite nke agbụrụ nke bọọlụ bọọlụ; mana, enweghi ihe omuma doro anya iji kwado nkwuputa a - libido stimulant na carnivores na-egosi na ezughị ezu akaebe. Otutu ichota ule nwere ike ghara ikwado nkwubi okwu a.
Nchịkwa Pulsatile ma ọ bụ infusion na-aga n'ihu (2.3-14 ng / kg / min maka 7-9 d) rụpụtara usoro na usoro ndu 2 si na 4 bitches n'otu ọmụmụ. Achọpụtala nchịkwa na-aga n'ihu maka 7-14 d site ngbasa obere-nfuli na-agbasa na njedebe dị elu nke ntinye ọkụ na-eme nri. Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na nchịkwa nke GnRH agaghị enwe ike ịba ụba: infusion mgbe niile ma ọ bụ unharness nke GnRH analogs site na obere nfuli ma ọ bụ ihe mgbochi hypodermic nwere ike ime ka ịmalite ịmalite ime na ịtụrụ ime, ọ bụrụhaala na a na-akwụsị nchịkwa GnRH mgbe usoro ihe omumu. iji gbochie ọdịda ọdịda endocrine akaghi aka. Agbanyeghị, nsogbu nnabata onye na-eme ihe na-eme ihe GnRH ma ọ bụ GnRH agonists na-enweghị ike ịgwọ ọrịa site na mmefu nke nsị pulsatile ma ọ bụ mkpa ọ dị maka ịga ụlọ ọgwụ na nsị niile.
Ganirelix Acetate Ịṅụ ọgwụ na-eme ka ndị ọrịa na-enwe mmetụta dị mma na Ganirelix acetate ma ọ bụ akụkụ ọ bụla na akọrọ mmiri / latex, nke a maara nke ọma na gonadotropin-na-atọhapụ secretion (GnRH) ma ọ bụ ọzọ analog GnRH, na ndị ọrịa na-ahụkarị ma ọ bụ ndị a na-enyo enyo. A na-agwa otu otu ọgwụ nkwụsị nke leuprolide acetate ka ọ bụrụ onye na-elekọta ndị na-elekọta ndị nọọsụ na-ebute na njedebe iri asatọ na atọ na usoro nchịkwa usoro iri asaa na asatọ.
Deslorelin, analog GnRH, emeputara ulo oru na Australia dika ihe eji emebi emebi nke nwere ihe di na 1 mg nke Deslorelin. Ọ na-adọta onye na-agba ọsọ ngwa ngwa. Na ọmụmụ ihe ndị mbụ, ihe na-eme ka ihe na-aga nke ọma bụ ihe ịga nke ọma na-ebute mgbe nchịkwa ndị ọrụ ngo nke 1.5 mg nke Deslorelin na 3 bitches. Otú ọ dị, ntinye nke rut na bitches abụghị ihe a pụrụ ịdabere na ya mgbe ụzọ a na-agba Deslorelin ma e jiri ya tụnyere ihe ndị na-adịghị mma. Ọdịiche dị iche iche na ị drugụ ọgwụ na metabolism dị n'etiti nkịta, ma ọ bụ ngwakọta ọgwụ na-agbanwe agbanwe, nwere ike ịme ikpe maka enweghị nkwekọ ndị a.Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Ngwurugwu submucosal etinyewo ihe ọzọ na Deslorelin. Iji dịrị njikere iwepụ ihe ndị a na-emepụta iji chebe ọkpụkpụ endocrine n'ikpeazụ, a na-etinye 2.1 mg Deslorelin implants nanị n'ime ebe dị ala ka akpụkpọ anụ nke dị n'ime (nke dị n'etiti) nke egbugbere ọnụ ụmụ nwanyị na asatọ na nsị asatọ; 8 / 8 bitches abata n'ime okpomọkụ n'ime anọ nke d. E wepụrụ ihe ndị a na-emepụta mgbe dọrọ aka na mmiri na-abata otu ng / mL, bọmbụ 5 / 8 wee tụrụ ime.
Mmetụta nke ịmụ nwa na-arụ ọrụ na bitches
Agonist GnRH na-eme ka e nwee mgbatị dị ogologo na nke a na-emegharị anya na ndị toro eto ma kwesịkwara iji ya maka ngwa a n'ọdịnihu. Otú ọ dị, ọtụtụ ebe a na-emeso ya na mbụ na-ekpo ọkụ na ntinye utịp mbụ nke ọgwụ ndị ahụ, onye nkwụghachi azụ nke edobebeghị.
Oge echere oge nke ndụ
Nchịkọta nke onye GnRH agonist (GnRH ethyl amide-A) n'ime ụmụ nwoke ma ọ bụ nwanyị nkịta nwanyị kwa ụbọchị maka ọnwa iri abụọ na atọ mere ka ego ghara ịba uru n'ọkụ na endocrine gland, nke na-enweghị mkpụrụ ndụ nke abụọ n'ime ovary na hypotrophy nke ndị na-ezochi LH-secreting mkpụrụ ndụ n'ime nwoke ọ bụla. Mgbe nkwụsị nke ọgwụgwọ na nkwụghachi nke ọnwa 14, e mejupụtara ọmụmụ. Pups sitere n'ememe dị iche iche nke dị iche iche nwere ụkọ anụ ọhịa dị ihe dị ka ọnwa anọ toro ogologo oge nkwụsịtụ oge nke ndụ na-enweghị nzaghachi ọ bụla n'oge a ga-emepụta ya. A natara otu ihe ahụ mgbe a malitere itinye agonist axia-nafarelin agnist na preksesches bitchescent. Oge nke ndụ na-egbu oge, n'enweghị mgbanwe ọ bụla nke uto ma ọ bụ ịdị arọ n'oge ọgwụgwọ. N'ime nchịkọta na-esonụ mgbe ịkwụsị usoro, usoro ndụ, na arụmọrụ endocrine bụ omenala.
Gonadorelin bụ ọgwụ na-ejikarị ụmụ nwanyị na-enwe nsogbu na oge mgbatị ha si na ya pụta gonadotropin-ịtọhapụ hormone. Enwere ike iji ya dị ka ọgwụgwọ infertility na ụmụ nwanyị ka ọ na-akwalite mmepụta nke GnRH. Ọgwụ ahụ dịkwa oké mkpa maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu ga-achọ inweta ahụ ike ma melite ike ahụ dum. Agbanyeghị, enwere ike ịme nke a naanị ma ọ bụrụ na ejiri ngwaahịa ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Dị ka onye na-eme egwuregwu, ị kwesịrị ịgba mbọ hụ na onye na-enye ọzụzụ gị, dọkịta gị na onye na-edozi ahụ maara na ị na-eji ọgwụ a. Mmega ahụ kwesịrị ekwesị na nri kwesịrị iso Gonadorelin acetate ogwu iji bulite nsonaazụ ahụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịbanye dọkịta gị na usoro dum maka nsonaazụ kacha mma. Ịzụta ọgwụ ahụ ma malite iji ya na-eme ihe ozugbo, nwere ike ime ka ị nwee mmetụta dị njọ. Ya mere, jide n'aka na ị ga-aga nyocha ahụ tupu ị malite iji ọgwụ. Mee ka dọkịta gị chọpụta ezigbo usoro ọgwụgwọ maka ị dabere na ihe ịchọrọ ime. Maka ndị mbido, ị ga-agụ ozi onye ọrịa ahụ na akwukwo akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị, iji hụ na ị na-agbaso nduzi ziri ezi tupu ịmalite iji Gonadorelin. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịghọta ntụziaka ahụ, egbula ịjụ dọkịta.
Ekwesịrị itinye ọgwụ ahụ site na injections nke ị kwesịrị itinye ya n'ime ahụ gị n'okpuru anụ ahụ ma ọ bụ akwara site na iji mgbapụta infusion dị ka onye dọkịta gị gwara gị. Ọ bụrụ na ijighi n'aka ịgbanye onwe gị, gbaa mbọ hụ na onye dibia na-enye ọgwụ. Dọkịta gị nwekwara ike ịzụ gị etu esi agbanye onwe gị; mgbe ị chọrọ ịga, ị nwere ike ịmalite ime ya n'ụlọ. Cheta, ịmalite ịmịnye ọgwụ acetate Gonadorelin na-enweghị ihe ọmụma nchịkwa ọgwụ kwesịrị ekwesị nwere ike iduga mmetụta ndị na-adịghị mma.
Ọgwụ ahụ nwere obere ndụ ma ọ bụ ya mere ị chọrọ ka ị ṅụọ ọgwụ ahụ n'ụlọ. Ị kwesịrị ịma usoro nkwadebe ahụ, ọkachamara nlekọta ahụ ike na-enye ntụziaka ndị eji eme ihe nakwa dịka a gwara ha na ngwugwu ọgwụ. Dọkịta gị nwekwara ike inyere gị aka ịghọta usoro a. Jide n'aka na ị na-agbaso ntụziaka ọ bụla banyere otu esi eji infusion mgbapụta. Ejikọla ngwaahịa ahụ ruo mgbe atọrọla gị iji ya. Tupu ịgbanye ya n'ime ahụ gị, nyochaa ma chọpụta ma ọ bụrụ na e nwere nchọpụta ma ọ bụ isiokwu ọ bụla dịka ha nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ọ dịghị mma maka ojiji.
Echefukwala ihichasị ebe ogwu ahụ site n'ịṅụ mmanya na saịtị ahụ. A ghaghị ime nke a oge ọ bụla ịchọrọ ịṅụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị na-enye ya n'okpuru akpụkpọ ahụ, ị ​​ga-agbanwe ebe ịgba ọgwụ ọ bụla mgbe ọ bụla dọkịta gwara gị ka ọ belata ohere ịnweta mmerụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya site na vein, ị nwere ike ime ya na saịtị ọ gwụla ma dọkịta gị na-adụ ọdụ gị ma ọ bụghị.
Usoro onyonyo ga-adabere na ọnọdụ ahụike gị na ihe ị na-achọ iji nweta ya. Dọkịta gị ga-adụ gị ọdụ na ọnụ ọgụgụ nke oge iji ya kwa ụbọchị. I kwesịkwara ichebara otú ahụ gị si emeghachi omume na ọgwụgwọ ahụ. Echefula ihe ọ bụla ị ga - eji dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọ dị ihe ọ bụla iji nyochaa otú ahụ gị si emeghachi ma gbanwee ojiji ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ejila ya maka ogologo oge karịa ka a gwara gị. N'oge a, jide n'aka na ị na-agbaso ntụziaka ọ bụla site n'aka dọkịta gị iji zere nsogbu. Dọkịta gị kwesịrị ịma ọganihu ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnwe nsogbu ọ bụla ka ọ mata n'oge.
Mmetụta dị iche iche dị obere ma mmadụ ole na ole kwuru na enwere nsogbu ọ bụla mgbe ịṅụ ọgwụ ahụ. Otú ọ dị, iji ya eme ihe ma ọ bụ na-enye ya maka oge dị ogologo karịa ka e nyere ya nwere ike ịkpata ma ọ bụ mmetụta dị nro ma dị egwu. Ọzọkwa, ihe ize ndụ nwere ike ịmalite site n'otú ozu dị iche iche si emeghachi omume na ngwaahịa. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị a kọrọ akụkọ ha gụnyere;
Ime ka akpụkpọ ahụ dị na Gonadorelin acetate (34973-08-5) injection- nke a bụ nke ka ukwuu mgbe a na-eme ya n'okpuru anụahụ, onye ọrụ ahụ anaghị agbanwekwa ebe nrụọrụ ahụ
Nsogbu na-enye nsogbu nye ndị na-eleghara anya ma jiri ya mee ogologo oge karịa ka edere ya
Mmeghachi omume na-adịghị mma maka ndị ahụ ha mere ka ha ghara ịṅụ ọgwụ ọjọọ
Akpụkpọ ahụ ọkụ
Nausea na-enwe mmetụta dị ka ịdaba
Redness na ihu na n'olu
Ọ bụrụ na ịchọta ọ bụla n'ime mmetụta ndị a, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị iji ya ozugbo ma chọọ enyemaka ahụike. Ọ bụrụ na ị na-emebiga ya ókè, belata ego ma hụ ma enwere mgbanwe ọ bụla. Dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ na-aga n'ihu.
Rịba ama na ọgwụ ahụ nwere ike ịmekọrịta na ọgwụ ndị ọzọ na-emetụta hormone. Ọ bụrụ n’ị nọ n’okpuru ọgwụ ọbụla, gbaa mbọ hụ na ịgwa dọkịta gị gbasara mgbakwunye na ọgwụ niile ị na - eji ugbu a. Kwesịrị ịkọrọ dọkịta ma ọ bụrụ na ị dị ime n'ihi na ọ bụ ezie na enweghị ihe akaebe banyere etu ọ ga-esi metụta nwa ebu n'afọ, ojiji ya nwere ike itinye nwa ebu n'afọ n'ihe ize ndụ ma ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ndụmọdụ ọkachamara.
Akụkụ dị mma nke ọgwụ a bụ na enwere ike ịchịkwa mmetụta ndị dị na ya ma ọ bụrụ na ị soro ntuziaka dọkịta gị. Egbula onwe gị iji ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na dọkịta gwara gị ka ị zere ya. N'aka nke ọzọ, ihe ka ọtụtụ na mmetụta ndị Gonadorelin acetate na-emetụta bụ n'ihi ịdụbiga mmanya ókè. Nọgide na usoro onunu ogwu iji chebe gị. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-adịkarị mfe inwe mmetụta karịa ndị ọzọ n'ihi usoro ahụ mmadụ dị iche iche. Nwere ike soro enyi gị jiri ọgwụ a, mana ị na-enwe mmetụta ndị ọzọ karịa ya. Nke ahụ dị mma karịa iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Ihe nwere ike ịrụrụ gị nwere ike ọgaghị arụ ọrụ enyi gị ma ọ bụ ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọpụta ụdị mmetụta ọ bụla pụrụ iche mgbe ị jiri ọgwụ ọjọọ ahụ, jiri obiọma gwa dọkịta gị ozugbo tupu ya njọ. Dọkịta ahụ nwere ike inye gị ndụmọdụ ka ị kwụsị ịṅụ ọgwụ ahụ mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị ma ọ bụ belata usoro ahụ. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị nwere ike imegharị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ dọkịta gị n'oge dị mma.
6. Zụrụ Gonadorelin Acetate (34973-08-5) online
Ozi ọma bụ na ị nwere ike ịzụta Gonadorelin Acetate ngwa ngwa site na nkasi obi nke ụlọ gị. I kwesịghị ichegbu onwe gị banyere ịchọta ya na ụlọ ahịa ndị dị na mpaghara ahụ. E nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ngwaahịa ahụ. Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-abịa, ị kwesịrị ịkpachapụ anya iji hụ na ị na-enweta ngwaahịa kwesịrị ekwesị. Ị ga-enweta scammers na aghụghọ na-ekwu na ị na-ere ọgwụ, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị akpachara anya, ị ga-ada ada maka ọnyà ha nanị iji nweta ọgwụ ndị na-egbu egbu ma dị ala, nke ga-abụ ihe efu nke ego gị.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịzụta Gonadorelin Acetate ntụ ntụ ma kwadebe ya n'onwe gị karịa ịnweta ya n'ụdị mmiri mmiri. Tupu ịmalite ịzụta, gbaa mbọ hụ na ị nwere ike ịtụkwasị obi na saịtị ahụ site na ịrịọ maka ntụaka sitere n'aka ndị ị maara nwere ike iji ọgwụ ahụ tupu. Anyị bụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị a tụkwasịrị obi ma nwee ntụkwasị obi, ị nwere ike ịtụkwasị obi na anyị nyefere gị ngwaahịa ahụ n'oge kachasị dị mkpirikpi ma nwee obi ike na a ga-ahụ nzuzo. Kpọtụrụ anyị maka inwekwu ase ma mee usoro gị.
Ugbu a, anyị bụ ndị na-eduzi Gonadorelin acetate and supplier, anyị na-ekwe nkwa na mma ngwaahịa na ndị ahịa anyị niile. Ebe nrụọrụ weebụ anyị bụ enyi-enyi, nke pụtara na ị nwere ike ịnweta ya na smartphone gị, mbadamba ma ọ bụ pc gị ma mee ka usoro gị n'ime sekọnd. Ị nwekwara ike ịmegharị ngwa ngwa site na otu ngwaahịa gaa na onye ọzọ ma ọ bụ ọbụna chọọ ọgwụ ndị ị na-achọ na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Maka ndị na-eme egwuregwu anyị nwere ihe kacha mma Gonadorelin acetate bodybuilding nke ga - enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị. N'aka nke ọzọ, anyị na-anabata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ịkwụ ụgwọ niile iji nweta onye ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị egbula oge ịkpọtụrụ onye ọrụ ndị ahịa anyị na ndị ọrụ anyị nwere ike ịza ajụjụ gị niile ma kwupụta nchegbu gị.Ngwakọta SARM na Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
N'ụzọ dị mma, FDA kwadoro iji Getadorelin acetate mee ihe n'ịkụzi anụ ụlọ. N'ebe ahụ, ọ nwere ike ịbụ na iwu akwadoghị ịzụrụ ọgwụ maka oriri mmadụ na United States of America. Otú ọ dị, iwu ojiji na-agbanwe site n'otu mba gaa na nke ọzọ. Anyị adịghị achọ itinye ndị ahịa anyị nsogbu maka naanị ịzụta ngwaahịa anyị dị elu. Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, lelee ma iwu obodo gị kwere ka iji Getadorelin acetate, mbubata ma ọ bụ ịzụta na mpaghara gị. Gwa onye dọkịta gị ka o gwa gị gbasara iwu gbasara ọgwụ na mba gị. Ọ bụrụ na ọ bụ iwu, ị nwere ike ịga n'ihu ma mee ka iwu gị na weebụsaịtị anyị. Ị nwere ike ịzụta Gonadorelin Acetate na nnukwu ma ọ bụ dị oke maka usoro ọgwụgwọ gị. Maka ịzụta ego, ị nwere ike ịnweta ego site na ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ị na-ere ọgwụ na ala, ịnwere ike ịtụle ngwaahịa ahụ n'aka anyị n'ụgwọ kwesịrị ekwesị.
Gonadorelin egosila na ọ dị irè ma nwee ntụkwasị obi nye ndị ikom na ndị inyom na-achọ ihe ngwọta maka nsogbu metụtara usoro mmepụta. Ọ na-abịa na ọtụtụ uru na mmetụta kachasị elu mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi na n'okpuru nlekọta nke ọkachamara. Gbaa mbọ hụ na ị zụta Getadorelin acetate site na onye na-ere ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma nwee ike ijide n'aka na ị ga-enweta nnukwu ihe. Lelee na ebe nrụọrụ weebụ dịgasị iche iche ma chọọ maka ndị ahịa anya tupu ịme iwu gị. Naanị ọgwụ ndị dị mma sitere n'aka onye na-ewu ewu nke onye na-azụ ngwaahịa dị ka anyị, ga-eme ka ị jide n'aka na ị ga-arụpụta nsonaazụ.
Gonadorelin acetate bodybuilding na-enyekwara ndị na-emepụta ahụ na ndị na-eme egwuregwu aka ka ha rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi ma soro ya na nri kwesịrị ekwesị na mgbatị. Jụọ onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụnye ọgwụ ahụ na nkwụsị gị ma ọ bụ ịkụcha mkpụrụ. Cheta, ihe niile ị chọrọ bụ ịrụ ọrụ kachasị mma, uru ahụ dị mma na nke a ga-arụzu ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ntuziaka Gonadorelin Acetate setịpụrụ. Adịla eji ọgwụ ahụ eme ihe ozugbo n'ihi na ọ na-arụ ọrụ maka enyi gị, gaa maka nyocha ahụike iji chọpụta ma ọ bụrụ na ahụike gị nwere ike ikwe ka ị jiri ọgwụ a.
Akın, O., Yavuz, ST, Hacıhamdioğlu, B., Sarı, E., Gürsel, O., & Yeşilkaya, E. (2015). Anaphylaxis na gonadorelin acetate na nwagbọghọ nwere afọ ojuju. Akwụkwọ nke Pediatric Endocrinology na Metabolism, 28 (11-12), 1387-1389.
Rastogi, S., Shukla, S., Kalaivani, M., & Singh, GN (2018). Usoro ọgwụgwọ Peptide: Nkọwapụta nke ọma, nchebara echiche usoro, na atụmanya. Nchọpụta ọgwụ taa.
Endo, N., Nagai, K., Tanaka, T., & Kamomae, H. (2013). Progesterone profaịlụ na caudal vena cava na jugular vein na nzaghachi na mkpali hormone na-akpali akpali nke ọgwụgwọ GnRH kpatara n'oge etiti luteal na-agba ara ehi ara ehi. Akwụkwọ nke Ntughari na Mmepe, 2012-191.